Sheekada filimka Shubh Mangal Saavdhan: inaba caadi ma ahan Ayushman iyo Bhumi filimkooda dhan walbo | Filimside.net
Home » Sheekada Filimada » Sheekada filimka Shubh Mangal Saavdhan: inaba caadi ma ahan Ayushman iyo Bhumi filimkooda dhan walbo
Sheekada filimka Shubh Mangal Saavdhan: inaba caadi ma ahan Ayushman iyo Bhumi filimkooda dhan walbo
Filimka Shubh Mangal Saavdhan waa mid shactiro iyo jaceyl isku jiro ah waana filim fariin muran dhalin karto xambaarsan madaama uu ka hadlaayo ragga dareen la’aanta ku dhacdo ama aan haweesan karin inay dumarka la fal galaan!
Jilaayaasha filimkaan: Ayushmann Khurrana, Bhumi Pednekar, Brijendra Kala, Seema Pahwa
Muxuu ku wanaagsan filimka Shubh Mangal Saavdhan: Sida la isugu dheeli tiray fariinta ragga dhibka ku qabaan inay wax damcaan, mada daalada filim ahaaneed iyo bandhiga jilaayaasha ay sameeyeen
Muxuu ku liitaa filimka Shubh Mangal Saavdhan: Qaybta labaad ee filimkaan xoogaa xaqiiqada ayaa laga weecanaa iyo mowduuca filimka xambaarsanaa.
Daawo ama ha daawanin filimka Shubh Mangal Saavdhan: Inaba caadi ma ahan shactirada dhameestiran uu leeyahay filimkan iyo bandhiga Ayushman iyo Bhumi hadii uu ku seego in lagaaga sheekeeyo ma wanaagsano.
Fariinta filimka Shubh Mangal Saavdhan oo kooban: Filimka wuxuu ku bilaabanaa xaflada aroos oo dhanka Hindiya ku saleesan siweyna loogu soo agaasimay aroosada Sugandha Joshi (Bhumi Pednekar) waxaana faraanti u galinaayo Mudit Sharma (Ayushmann Khurrana).
Kadib waxaa la galaa xasuus ahaan ama sheeko ahaan waayihii quruxda badnaa ee qof walbo noloshiisa soo martay in dib looga sheekeeyo.
Sugandha Joshi (Bhumi Pednekar) iyo Mudit Sharma (Ayushmann Khurrana) waxay isku jeclanayaan marka nolosha dhabta ah la guda galo oo la isi siiyo waayo markii hore jaceyl kama dhaxeynin waana labo waalidka isku dooreen markii hore.
Kadib Mudit Sharma (Ayushmann Khurrana) wuxuu u sharxaa xaaskiisa Sugandha Joshi (Bhumi Pednekar) dhibaatada uu qabo oo ah inuusan dumarka haweesan karin ama kacsan karin oo uu qabo dhibaatada loo yaqaaan (Erectile dysfunction) oo ah inuu damac galaayo balse xubintiisa taranka sidii laga rabay u kaceynin si ay shaqadii dabiicaga ahayd ee loogu tala galay u qabato!
Mudit Sharma (Ayushmann Khurrana) walaac iyo baqdin ayaa galeyso sidoo kalena arinkii uu xaaskiisa u sheegay Sugandha Joshi (Bhumi Pednekar) waxay noqonee mid waalidka gaareyso kadibna sheekada sii faafeyso.
Hadaba Sugandha Joshi (Bhumi Pednekar) waalidkeeda waxay ka dalbanayaan Mudit inuu guurkaan soo gaba gabeeyo ama iyaga talaabo qaadi doonaan!
Hadaba Mudit Sharma (Ayushmann Khurrana) maxaa la gudboon inuu sameeyo, xaaskiisa Sugandha Joshi (Bhumi Pednekar) sidee isaga u caawin kartaa, sidoo kale xal maloo heli karaa dhibka uu qabo, reerka iyo bulshadana halkee ka gali doonaan?
Maxaa laga yiri isku xirka sheekada filimkaan: Director R S Prasanna wuxuu ku amaanan yahay inuu doortay fariin aysan jecleyn dadka Hindiga ah laga hadlo balse hab mada daalo ayuu fariintiisa u dhigay taasi oo sahli doonto inay dad badan filimkaan daawadaan lana dhacaan sida dhib walbo xal loogu heli karo.
Waxaa aad u wacneyd in mowduuca aan laga bixin qaybha dambe ee filimkaan laakiin habasanaanta yar ee fariinta ka muuqato waxaa ka weyn mada daalada dhameestiran uu leeyahay filimkaan iyo bandhiga hogaamiyaasha oo aad kuu soo jiidanayo.
Bandhiga Jilaayaasha sameeyeen: Ayushmann Khurrana wuxuu la yimdi mid ka mid bandhiga ugu wanaagsan sanadkaan sidoo kalena atoorahan wuxuu muujiyay inuu door walbo kasoo dhalaali karo inkastoo uu doortay fariin baqdin leh hadana bandhigiisa inaba caadi ma ahan wuxuu mudan yahay in abaal marin lagu siiyo.
Bhumi Pednekar filim walbo oo ay sameyso dadka ayay qalbiga kasii xadeysaa waayo labadeedii filim ee hore DUM LAGA KE HAISHA iyo TOILET- EK PREM KATHA siweyn ayaa loogu amaanay midkaana kama liito madaama ay muujisay markale inay fariin xasaasi ah sameyn karto weliba kalsoonida ka muuqato waxaa la moodaa inay mudo dheer fanka ku jirto, baraawo Bhumi.
Dhamaan jilaasha kale ee filimkaan doorka caawiyaha ah ku leh bandhig qurux badan ayay sameeyeen sidoo kalena waa dadka kugu xiiso galinaayo daawashada filimkaan marka hogaamiyaasha laga soo tago
Gunaanad: Shubh Mangal Saavdhan ma ahan filim shactiro qaawanaan ah leh, balse waa filim shactiro oo fariin xasaasi ah lagu lifaaqay hab mada daalo ahna loo sameeyay oo qof walbo daawan karo.
Kani waa mid ka mid ah aflaanta muuinaayo in Bollywood-ka mararka qaar fariin dheeli tiran sameyn karaan, sidoo kalena Ayushmann & Bhumi si qurux badan ayay kaga dhigeen fariintaan dheeli tiran mid lagu raaxeesan karo.
Dadka filimada ka faaloodaan cel celis ahaan sheekada filimkaan waxay siiyeen 3.5/5 taasi oo ka dhigan in fariintiisa tahay mid aad u wacan.
Dhanka Boxoffice-ka Shubh Mangal Saavdhan ma ahan filim fagta hore ganacsi wacan sameyn karo waana filim ku xiran ganacsigiisa sida ay daawadayaasha u amaanaan waana hubaal maalinta kowaad wixii ka dambeeyo in fariintiisa wacan la isku sheeg sheegi doono kadibna ganacsi wacan uu cimri ahaantiisa sameyn doono.
Waxaa Aqrisay 236